लकडाउन पछि भेटिएका पुजा र आकाशले आफ्नो प्रेम र विवाहको बारेमा यसरी खुलेरै बोले (भिडियो हेर्नुस्) – Sandesh Munch
September 8, 2020 174
धेरै फिल्ममा आकाश र पुजा संगै भएकाले पनि दर्शकले यस्तो अनुमान गरेको हुनसक्ने बताएका छन् । फिल्म निर्माताहरुले पनि दुई जनालाई नै प्राय संगै राख्ने मनसाय राख्ने भएकाले यस्तो सम्भव भएको बताएकी छन् । फिल्म क्षेत्रमा दुई जनाले फिल्ममा एक अर्कालाई अफर गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर त्यो कुरा उनीहरुले भने अस्वीकार गरेका छन् । कहिल्यै पनि आफुहरुले एक अर्कालाई अफर नगरेको बताएका छन् ।
Nextकम उमेरमै अत्यन्तै धनवान हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, तपाईको कुन राशि ?
यस समयमा गर्भमा आएको बच्चा हुन्छ निकै भाग्यशाली !
भारतकै किताबमा पढाइ हुन्छ कालापानी लिपुलेक नेपालकै हो भनेर